HIM | Health in Myanmar » 2013 » October
အရှေ့ကိုလျှောက်ပါလို့.. အနောက်ကိုတဲ့.. မျှော်လိုက်ရင် (၁၀) - နောက်ဆက်တွဲ
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါး1 comment | Tags: HIV, STD, ပညာပေး, လူငယ်
ရာသီသွေး စဆင်း စသဖြင့်။ ကျားဟော်မုန်း။ မဟော်မုန်းတွေက ဘာ။ သန္ဓေ ဘယ်လိုဆောင်။ သန္ဓေ ဘယ်လိုတား။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တာ ဘယ်လို။ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံရေးက ဘယ်လို။ လိင်ဆက်ဆံရေးက လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေ ဆိုတာက ဘာတွေလဲ၊ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်က ဘာ။ အကုန်သိကြပြီ။ ဒါတွေကို မသိသင့်တာ ဘာရှိသလဲ။
အသဲရောင် (စီ) ဘယ်လိုကုသလဲ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, ကုသမှု, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လိင်ကတဆင့်ကူးတဲ့ HIV ပါရှိနေသူဆိုရင် Acute infection စောစောပိုင်းကတည်းက ကုရင်ကောင်းတယ်။ Mild liver disease အသဲရောဂါ နည်းနည်းလေးသာ ရှိနေသူတွေ ဆေးမလိုသေးပါ။ Moderate liver damage အသဲရောဂါ အသင့်အတင့် ဆိုးလာသူတွေက Cirrhosis အသဲခြောက်တာ ဆက်ဖြစ်စရာများလို့ ဆေးကုသရမယ်။
အရှေ့ကိုလျှောက်ပါလို့.. အနောက်ကိုတဲ့.. မျှော်လိုက်ရင် (၁၀)
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: HIV, STD, လူငယ်
လိင်ဆက်ဆံရာကရတဲ့ ကလာမိုင်းဒီးယားလို အဖြစ်များ ကူးဆက်ရောဂါတွေကနေ ဂနို-ဆစ်ဖလစ်၊ လိင်အင်္ဂါစပ်ရေယုန်၊ လိင်အင်္ဂါမှာ ပေါက်တဲ့ ကြွက်နို့တွေကနေ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ အထိ။ နောက် အသည်းရောင်အသားဝါ၊ ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေး ထိုးမလား ။ သန္ဓေတားနည်းတွေက မျိုးစုံ။ ကွန်ဒုံတွေ အလကား။ တခါ ပုံမှန်စားဆေး၊ ထိုးဆေးတွေမလို။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, UNAIDS, ဧရာဝတီ
“ဒီလို ရွေးချယ်တာဟာ ကျမအတွက် တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူစရာပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ စည်းခြား ဝေးကွာနေရပြီး၊ လူသား ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး ရဖို့ မြှင့်တင် စောင့်ရှောက် ရမှာပါ။ ကျမ အနေနဲ့ အသံမဲ့နေသူတွေရဲ့ ပဲ့တင်သံ ဖြစ်ချင်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
There is something wrong in the field of ‘human trafficking”. Unsubstantiated claims and ineffective activities are destroying credibility. Please keep antitrafficking organisations away from HIV. BTW,a“Myanmar Check” website to separate fact from fiction would beawelcome addition to the web. Jamie ++++++++++++++++++ Are 30,000 children really ‘trafficked’ in South Africa every year? […]
Read an article on the state of the art of treatment as prevention
The next time you hear someone say the words ‘treatment as prevention’ please ask them if they have read the article below that you can download from The Lancet. It puts the hype into perspective. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2961998-4/fulltext?_eventId=login Jamie ++++++++++++++++++ Summary Antiretroviral drugs that inhibit viral replication were expected to reduce transmission of HIV by lowering the […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, Q&Ano comments | Tags: HIV, PLH, ဆေးဝါး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျွန်မ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်က HIV positive ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ဆေး မှန်မှန်သောက်ရင်း မနှစ်က ဆေးစစ်တော့ HIV negative ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ထပ်ခါထပ်ခါ စစ်တာလဲ ဒီအဖြေ ပါပဲ။ သူ့ အမျိုးသမီးကလဲ negative ပါပဲ ဆရာ။ HIV ကို ပျောက်နိုင်တဲ့ ဆေးမရှိဘူးလို့ သိထားတော့ ဒါက ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲ။
HIV ပိုး ရှိမရှိ သေချာစေလို (အမေးအဖြေ) (၄)
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&A3 comments | Tags: AIDS, HIV, ပညာပေး, လမင်းကို
သူ့ဆီက ထွက်တဲ့ မိန်းမ အရည်က ကွန်ဒုံးအဆုံး လိင်တံ အရင်းအသားမှာ စိုနေပါတယ်။ ပြီးပြီးချင်းတော့ ရေဆေး ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အသားမှာ စိုတာကကော HIV/AIDS ကူးဆက်နိုင်ပါ သလား။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ၂ ပတ်အကြာလောက် ပေါင်ကြားမှာ ယားပြီးတော့ ပူနေပါတယ် (အရေပြား အပူလောင် သလိုမျိုး) အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်တာလဲ သိပရစေ။
High yield HIV testing
It is not surprising that Myanmar may meet the tuberculosis MDG subgoal as the bar is set so low. The WHO tuberculosis report on Myanmar states: “Concerted efforts are required to increase HIV testing while also ensuring access to ART for HIV-positive TB patients,” HIV testing for newly-diagnosed tuberculosis patients will show that one in […]
Real drug shortage
Remember when we used to read reports abouta‘drug shortage’ of antiretrovirals? This tuberculosis drug shortage isaREAL drug shortage. How did it happen? What went wrong? Has the immediate problem been resolved? The longer term one? Jamie ++++++++++++++++++ Tuberculosis medication to ‘run out’ by October DVB 13 September 2013 Vital tuberculosis (TB) […]
Here is useful reading for HIV professionals and journalists. Did you know that 95% of statistics are made up on the spot? 🙂 Jamie ++++++++++++++++++++++++++++ Six Ways to Separate Lies From Statistics Betsey Stevenson & Justin Wolfers May 1, 2013 6:00 PM ET The discovery ofaspreadsheet error in an influential study by Harvard […]